२ वर्ष देखिको प्रेम सम्बन्ध छुटेपछि यो त’नावमा अन्जली अधिकारी ! – Ramailo Sandesh
२ वर्ष देखिको प्रेम सम्बन्ध छुटेपछि यो त’नावमा अन्जली अधिकारी !
काठमाडौं– गलबन्दी कि मोडल अन्जली अधिकारी अहिले लोक दोहोरी तथा आधुनिक गितको मोडलिङ्गमा व्यस्त रहेकी छिन भने रिलिज हुन लागेको चलचित्र माया पिरिमको एक प्रमोसनल गितमा अभिनय गरेकाले अहिले मिडियामा छाइरहेकी छिन ।
मोडल अन्जली अधिकारीको लाहुरे केटासंग प्रेम छ भन्ने ह’ल्ला केहि समय अघि सोसल मिडियामा खुब छाएको थियो । यस बारेमा एक युट्युव च्यानलसँगको अन्तरवार्तामा अन्जलीले भनिन् :“मेरो कोही प्रेमी छैन र लाहुरे केटा मेरो प्रेमी पनि भनेको होईन । मैले लाहुरे केटा राम्रो लाग्छ भन्दा प्रसारण गर्दा अर्कै तरिकाले देखाइयो जसले गर्दा दर्शक झुक्किनु भयो ।
मेरो अहिले कोही प्रेमी छैन भन्ने प्रष्टाउन चाहन्छु ।”मलाई मोडलिङ्गमा रुचि थियो र भविष्य बनाउन थियो तर मेरो तत्कालिन प्रेमीलाई भने यो क्षेत्र मनपर्दैन थियो । त्यस्तो हुँदा सम्बन्ध सुमधुर हुन सकेन न त करियरमा अघि बढ्न सकिने भयो । अन्तत: हामी छुटियौ ।”
अन्जलीले आफ्नो पूर्व प्रेमीसंग ब्रे’कअप भएको किस्सा पनि अन्तर्वार्तामा सेयर गरेको छिन । अन्जलीले भनिन् : “मलाई मोडलिङ्गमा रुचि थियो र भविष्य बनाउन थियो तर मेरो तत्कालिन प्रेमीलाई भने यो क्षेत्र मनपर्दैन थियो । त्यस्तो हुँदा सम्बन्ध सुमधुर हुन सकेन न त करियरमा अघि बढ्न सकिने भयो । अन्तत: हामी छुटियौ ।”
एसएलसीपछि भागेर काठमाडौं-स्कुल पढ्दा शिक्षक र साथीहरुले अन्जलीको नृत्यको प्रशंसा गर्थे तर, परिवारमा आमाको मात्र समर्थन थियो । ‘बुबा र दाइ म नाचेको पटक्कै मन पराउनु हुन्नथ्यो’, उनी सम्झन्छिन् ।२०७२ सालमा एसएलसी परिक्षा दिएपछि अन्जली भागेर काठमाडौं आइन् ।
बद्री पंगेनीलाई सम्पर्क गरेपछि उनकै निरमाया दोहोरी साँझमा काम पाइन् । उनी भन्छिन्, ‘हिराले हिरा चिन्छ रे । उहाँले मेरो प्रतिभालाई चिन्नुभयो ।’भिडियो खेल्न घरबाट भागेकी अन्जली दोहोरी साँझमा नाच्न थालिन् । दोहोरी साँझमा काम गरेको भनेर नराम्रो नजरले हेर्ने अप्ठ्यारो पनि झेलिन् ।
तर, दोहोरी साँझ नै उनका लागि नृत्य सिक्ने पाठशाला बनिदियो । एकवर्ष काम गरेपछि बदि्रले एउटा गीतमा मोडलिङ गर्ने अवसर दिए ।बद्री र मिरा गिरीको स्वरमा रहेको ‘खर बारीमा’ बोलको गीतमा अञ्जली पहिलो पटक देखिइन् । त्यो समय बद्री पंगेनीको गीतबाट डेब्यू गर्नु पनि उनको लागि ठुलो सफलता थियो ।
यो जन्मिएको बच्चा त तिम्रै त हो नि भन्दै श्रीमतिले पुर्ब प्रेमी संग कुराकानी गरेको श्रीमानले सुनेपछि जे भयो………..